Azerbaijan waxay kordhisay wax soo saarka iyo dhoofinta baradhada - Nidaamka Baradhada
Bishii Janaayo-Oktoobar ee sanadkan, Azerbaijan waxaa laga soo saaray 982,1 tan oo baradho ah.
Sida laga soo xigtay APA-Dhaqaalaha, sida laga soo xigtay Guddiga Istaatistikada ee Gobolka, marka la barbardhigo isla muddadaas sanadkii hore, tilmaamahani wuxuu kordhay 1,6%.
Bishii Janaayo-Sebtember, Azerbaijan waxay dhoofisay 81 320,7 tan oo baradho ah oo xaddigeedu yahay 33 755,8 kun oo doolarka Mareykanka ah, taasoo u dhiganta siday u kala horreeyaan 25,8% iyo 31,8% ka sarreysa tilmaamayaasha 9 bilood ee sannadkii hore.
Muddadan, waddanku wuxuu soo dhoofiyay 104,3 kun tan oo baradho ah qadarka 28 168,3 kun oo doolar. Marka loo eego muddadii u dhiganta ee sanadkii hore, mugga wuxuu kordhay 4,6%, qiimaha - 1,1%.
Tags: AzerbaijanDhoofinta baradhada